UCharles Dickens. Indoda eyasungula iKrisimesi. | Uncwadi lwangoku
UCharles Dickens. Indoda eyasungula iKrisimesi.
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Iincwadi, Inoveli
Masijongane nayo. IKrisimesi ngaphandle kukaCharles Dickens ayisiyo iKrisimesi okanye nantoni na. IKrisimesi ngaphandle kwakhe Mnu scrooge, iqabane lakhe UJakob marley, umtshana wakhe oziphethe kakuhle, umqeshi wakhe oyekile emsebenzini UBob Cratchit kwaye ngaphandle kwakhe ixesha elincinci ayiyokhisimusi. Kwaye ngaphandle kwemimoya yexesha elidlulileyo leKrisimesi, ngoku nakwixesha elizayo. Ayikho iKrismesi ngaphandle kwakhe Ibali leKrisimesi yalo mbhali wesiNgesi, enye yezona zibalulekileyo kuncwadi lwehlabathi, hayi iSaxon kuphela.
Ikhutshiwe imuvi entsha malunga nomzimba wakhe kunye indlela awaqulunqa ngayo ibali lakhe elingenakufa okanye ngokungathandabuzekiyo ithandwa ngakumbi. Indoda eyasungula iKrisimesi Iinkwenkwezi uDan Stevens, uChristopher Plummer noJonathan Pryce phakathi kwabanye. Kwaye uthotho lwe-umpteenth i-BBC (ewe) elungiselele le mihla nayo isalindile. Sinika elinye ithuba lokuya kule klasiki ibalulekileyo kwaye le nguqulo intsha yefilimu yokukhulelwa kwakhe.
3 Umboniso eLondon. Umoya wembono: ukufumanisa iKarimesi yeKrisimesi.
Ewe uDickens Khange ayenze iKrisimesi, kodwa wakwazi ukuyibuyisela kwakhona okanye ukuyifumana kwakhona ngeli bali. Uphawulile okanye uyazi indlela yokuhambisa kunye nokuchaza uthotho lweenkolelo, amasiko okanye useto olwenziwe okanye lwenziwa umbulelo wefashoni kuye.
Kubhaliwe Ibali leKrisimesi kulungile ngaphambi kweKrisimesi 1843 kwaye kuyo wayefuna ukubamba iinkumbulo zakhe kumazantsi mpuma eNgilane. Apho, kwimimandla yasemaphandleni apho wakhulela khona, kwakukho ipiyano apho kwakudlalwa khona iminqwazi kwaye umama wakhe epheka iturkey endaweni yerhasi. Kukwanomdla wokuba lalikhithika kakhulu apho ubusika babudla ngokuthamba khona. Kwaye ikhephu, elikho kuyo yonke indawo kwimbali, beliya kuba yinto ebalulekileyo kuwo onke amabali aza kupapashwa kamva.
Ibali leKrisimesi ikwayiyo ukugxekwa kwezentlalo Ukusuka kuDickens ukuya kwimeko enzima awayifumana kuhambo oluya eManchester, apho wabona ubungqina babasebenzi. Iqale njenge inqaku lokuxela ngokukodwa ukuphathwa gadalala kwabantwana. Kwaye yagqitywa ukuba libali elinomxholo, iimvakalelo kunye neemvakalelo zisekhona emva kweminyaka eyi-170.
Impumelelo yenoveli yakhawuleza kwaye zinkulu kakhulu kwaye zathengiswa Iikopi ezingama-6.000 kwiveki yokuqala. UDickens wayeyazi indlela yokunxibelelana namawaka abo bemi, abathi, njengaye, bakhumbula ngeKrisimesi elula, kude neefektri, oololiwe abamphunga, ungcoliseko kunye neemeko zokuphila ezibi.
Ikhutshiwe eMelika nase-United Kingdom, kodwa apha akwaziwa ukuba iza kufika nini okanye nini. Oku isekwe kwincwadi kaLee Standiford isihloko somntu. Xelela ibali ngokuthinta imilingo awayeyinxibile ekudalweni kwe-Ebenezer Scrooge (UChristopher Plummer), uTim omncinci kunye nabanye abalinganiswa bakudala Ibali leKrisimesi.
Babeziveki ezintandathu apho umbhali ahamba khona ngokubalulekileyo Bump kwikhondo lakhe lomsebenzi emva kokusilela kweenoveli zakhe ezintathu zokugqibela, kunye nabapapashi abakhulu bayala umbono wakhe webali elibekwe malunga neKrisimesi. Ikhokelwe ngu Bharat nalluri kwaye usibonise indlela uDickens (Dan Stevens) uxube ubomi bokwenyani kunye nomfanekiso wakhe ocacileyo ukwenza oonobumba abangenakulibaleka kunye nentsingiselo esele igcwele.
UCharles Dickens UDan Stevens
Ebenezer Scrooge UChristopher Plummer
UJohn Dickens - UJonathan Pryce
Umboniso eLondon. Isiporho sembono: ukufumanisa ibali leKrisimesi.
Umboniso uthiwe thaca apha Isitalato i-Doughty Street kumbindi we Bloomsbury eLondon. Ibiyi Ikhaya lokuqala losapho lakwaDickens, owafudukela apho ngo-1837 kunye nenkosikazi yakhe uCatherine kunye nomntwana wabo wokuqala. Wayengumlobi-ntatheli esebenzisa igama elibi elithi Boz.
Kule ndlu yemyuziyam idibana Ingqokelela enkulu yezinto kunye nezinto ezizezakho zombhali kunye nosapho kwaye iyaqhubeka nokwandisa iivenkile kuba akukho sithuba saneleyo sokubonisa yonke into. Iimpahla ezahlukeneyo ezisetyenziswa ngabadlali kwifilimu nazo ziyaboniswa. Umboniso uzakuba eivuliwe kude kube nguFebruwari 25, 2018. Esinye isizathu sokutyelela eLondon.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » UCharles Dickens. Indoda eyasungula iKrisimesi.
UJessica Arce sitsho
Ngaba unalo naliphi na ithuba lokuba uyazi ukuba le movie sele inikiwe eLatin America? Ndilinde le movie ukusukela kunyaka ophelileyo. Into endiyithanda kakhulu ukuyibona ngeKrisimesi ziinguqulelo ezahlukeneyo ezikhutshwe kweli bali limangalisayo, eyokuqala endiyibonileyo yayiyinguqulelo yeLooney Toons kwaye eyona ndiyithandayo kulapho uBill Murray enza khona.
Ubusazi...? IKrisimesi kunye neencwadi ...
I-6 yeencwadana zokuqala zolwaphulo-mthetho zango-2018